स्वागत यात्रा पुरा नहुँदै झाको मन्त्री पद चैट ! - Mountain Media
स्वागत यात्रा पुरा नहुँदै झाको मन्त्री पद चैट !
रौतहट । नेपाल सरकारका खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री अनिल कुमार झा मन्त्री भएपछि पहिलो पटक आफ्नो गृह जिल्ला रौतहट आएका थिए । उनलाई स्वागत गर्न जिल्लाको उत्तरी भेगमा रहेको चन्द्रनिगाहपुरमा ठुलो संख्यामा उनका शुभचिन्तकहरु आएका थिए । उनलाई चन्द्रनिगाहपुरमा शुभचिन्तकहरुले फुलमाला सहित भव्य स्वागत गरेका थिए ।
चन्द्रनिगाहपुरबाट उनलाई सुरक्षाकर्मी र शुभचिन्तकहरुले स्कर्टिङ्ग गरेर जिल्ला सदरमुकाम गौरसम्मको यात्रा सुरु गरेका थिए । बाटोमा विभिन्न स्थानमा उनलाई शुभचिन्तकहरुले रोकेर फुलमाला अविरले स्वागत पनि गरेका थिए । उनको सवारीमा ठुलो संख्यामा उनका शुभचिन्तकहरुको सवारी साधनहरुको ताँती लागेको थियो । ती सवारी साधनहरु अधिकासं भारतिय नम्बर प्लेटका थिएँ ।
रौतहटमा उनको सवारीको दृश्य हेर्दा तमिल फिल्मको झल्को दिएको थियो । तर उनको सो सवारी चन्द्रनिगाहपुरबाट गौरसम्म ४२ किलोमिटरको यात्रा तय गर्न नपाउँदै बाटोमै सर्वोच्च अदालतको मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश आयो । जसका कारण उनी सहित २० जना मन्त्री पदमुक्त भइसकेका थिए । यसरी चन्द्रनिगापुरबाट गौर पुग्न नपाउँदै बाटैमा उनको मन्त्री पद चैट भयो ।
मन्त्री पदमा रहेर तामझाम सहितको उनको यात्रा ४२ किलोमिटर पुरा हुन नपाउँदै मन्त्री पद गुमेको छ । उनको यो अवस्थालाई जिल्लाका सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताले सामाजिक संजालमा व्यङ्य गर्न थालेका छन् । स्थानिय संचारकर्मी सतेन्द्रप्रताप सिंह आफ्नो फेसबुकमा लेख्छन् , ‘गाडीमा झण्डा हल्लाएर आउने मन्त्री अब झण्डा फुकालेर घर जाने भए।’
झालाई गृहजिल्लामै कालोझण्डा
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाट पदमुक्त भएका निवर्तमान खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री अनिल कुमार झालाई जिल्लाको मध्यभागमा रहेको गरुडामा कालोझण्डा देखाइएको छ ।उनलाई कालो झण्डा देखाउने तीन जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडामा राखिएको छ ।
पक्राउ पर्नेहरुमा माधवनारायण नगरपालिका ३ सखुअवाका ललन यादव, गरुडा नगरपालिका वडा नम्बर ५ का विजय यादव र दिपेन्द्र यादव रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ । मन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो पटक गृह जिल्ला आउने क्रममा गरुडाको झाँझ पुल नजिकै कालो झण्डा देखाएर विरोध गरिएको थियो ।
पक्राउ परेकाहरुले झाले मधेस र मधेसीप्रति घात गरेको, रेमश चौधरीको रिहाइको लागि पहल नगरेको, मधेस आन्दोलनको भावना विपरित सरकारमा गएको लगायतका आरोप लगाएका छन् । नेपाली काँग्रेस लगायतका विपक्षी गठबन्धनले पक्राउ परेकाहरुलाई विना शर्त यथासिघ्र रिहा गर्न माग गरेका छन् ।
Previous: आमालाई बस चढाएर फर्केकी छोरीको त्यही बसले किचेर मृत्यु
Next: यी अभिनेत्रीले २ करोड दिदापनि किन गरिनन् मेकअप ? यस्तो छ कारण (तस्बिरसहित)